Sida loo maareeyey arrinta dhaawaca Kornayl Saneey oo muujinaysa 2 arrimood oo walaac leh | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sida loo maareeyey arrinta dhaawaca Kornayl Saneey oo muujinaysa 2 arrimood oo...
(Muqdisho) 20 Juun 2021 – Xogo hoose oo laga helayo Shabeellada Dhexe oo qaar laga helay saraakiil ciidan ayaa sheegaya in DF Somalia laga diidey inay qaaddo dhaawaca Korneel Saneey Cabdulle oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay Gobolka Shabeellada Dhexe oo uu ka howlgalo.
Warka ayaa intaa raacinata in ehellada Korneelku ay diideen in diyaarad gaar ah oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay QM leedahay lagu soo qaado dhaawaca Kornaylka si deeto loo dhigo Isbitaalka Digfeer.
Waxa la isku diideyna waa in si buuxda uu Kornaylku u galo gacanta DF, iyadoo markii lasoo qaaday dhaawaciisa oo fudud la keenay gurigiisa oo loogu geeyey dhakhaatiir gaar ah, sida ay xoguhu sheegayaan.
Ehelada ayaa sheegay in ay kalsooni ku qabin DF maadaama uu ka mid ahaa raggii ku gadoodey muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee MW Farmaajo ku dhaqaaqay.
Arrintan ayaa muujinaysa in aan la wada fulin qoqobbadii lagu heshiiyey oo ay ku jireen in dib loo dhiso kalsoonidii burburtay ee Ciidamada Qalabka Sida, iyadoo horay loo diley kaddibna god qashin ah looga helay wiil askari ahaa oo ka tirsanaa kuwa gadoodey kaddib markii uu ku laabtay xerada Iskuul Buliisiya.
Waxaa kale oo muuqanaysa in dalka oo ku socda nidaam dimoqraadi ihi uu u muuqanayo mid ay kasii lumayso isla xisaabtankii iyadoo ay wax walba ku salaysan yihiin rabitaanka iyo diidmada hal qof.
Previous articleXafsa Luqdmaan oo iyada oo nool balse jirdilan lagu soo wareejiyey eheladeeda & Kenya oo ay kiisaskani ku kordhayaan
Next articleSOMALIA VS CUMAAN: Somalia oo caawa fiidkii wajahaysa ciyaar bug-bax ah oo muhim ah